CENAM: Nivoaka tamin’ny fomba ofisialy ny andiany EZAKA. | Canalnews Madagascar
Home A LA UNE CENAM: Nivoaka tamin’ny fomba ofisialy ny andiany EZAKA.
A LA UNEACTUALITECULTUREECONOMIE
CENAM: Nivoaka tamin’ny fomba ofisialy ny andiany EZAKA.
By Nirinasept 08, 2017, 07:24 0
Nitombo indray ireo Malagasy miasa amin’ny sehatry ny asa tanana. Mpianatra 88 nanao fiofanana tao amin’ny Ivon-toeram-pirenenan’ny asa tanana Malagasy (CENAM) no nozaraina fanamarinam-pahavitam-piofanana. Niofana tamin’ny sehatr’asa isan-kazarany toy ny tenona (tissage), rary (vannerie), korose (crochet), amboradara (broderie), zaitra (coupe et couture), rafitra vy (ouvrage metallique), tandroka (corne), fanodinana akora natoraly, mekatronika, fanodinana plastika sy akora sarotra levonina ho haingo (recyclage) ireto andiany EZAKA ireto.
Nambaran’ny Tale Jeneralin’ny CENAM, KANTE RENE fa tsy hiroborobo ny asa tanana Malagasy rehefa tsy misy ny mpanjifa izany. Noho izany, tokony ny Malagasy no hanjifa izany voalohany ho fanomezan-danja vita gasy. Eo ihany koa ny hampivoarana hatrany ny asa tanana sy hanampiana ireo mpiantsehatra.
Nanatrika ny lanonana famoahana ireo andiany voalohany ny Ministry ny Kolotsaina, ny fampiroboroboana ny asa tanana sy ny vakoka, Andriamatoa Jean Jacques RABENIRINA. Ny Loholona sady mpanolontsaina maneran-tany misahana ny asa tanana, tomponandraikitry ny faritra Atsimon’ny Afrika, Alibena RAZAFITOMBO.
Previous PostCROIX ROUGE MALAGASY: Ny fanalefahana ny voka-dratsy ateraky ny loza voajanahary. Next PostONIVERSITE E-media : Mahazo Licence ao anatin’ny 18 volana .